के सलमानको स्टारडमसँग डराएर पछि हट्लान त अक्षय कुमार ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodके सलमानको स्टारडमसँग डराएर पछि हट्लान त अक्षय कुमार !
के सलमानको स्टारडमसँग डराएर पछि हट्लान त अक्षय कुमार !
April 9, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
हरेक वर्षको इदमा सलमान खानको फिल्म रिलिज हुने गर्दछ । यो थाहा हुदा-हुदै पनि रोहित सेट्टी र अक्षय कुमारले फिल्म ‘सूर्यवंशी’लाई २०२० को इदमा रिलिज गर्ने भएका छन् । उनिहरुले पहिला देखिनै इदलाई कब्जा गर्यो भने सलमानले आफ्नो कुनै पनि फिल्मलाई इदमा ल्याउदैनन भन्ने सोचेर इदमा रिलिज घोषणा गरेका हुन ।
२०१९ को अन्तिम साता रिलिज गर्ने भनिएको ‘सूर्यवंशी’को छायांकन सम्पन्न नभपछि फिल्मलाई २०२० को इदमा रिलिज गर्ने निणय गरिएको हो ।
अक्षय कुमारको फिल्म इदमा रिलिज गर्ने भनिएतापनि सलमानलाई यो कुराले कुनै फरक परेको छैन । यति मात्र नभएर उनले संजय लिली भन्सालीसँग मिलेर फिल्म ‘इंशाल्लाह’को घोषणा समेत गरेका छन् । यो फिल्म २०२० को इदमा रिलिज गर्ने पनि बताएका छन ।
भारतीय संचार माध्यमका अनुसार, रोहित र अक्षयले ‘सूर्यवंशी’लाई सलमानको ‘इंशाल्लाह’सँग नजुदाउने र फिल्मको डेट सार्ने सोचिरहेका छन ।
रिसै-रिसले भरिएको शाहिदको ‘कबिर सिंह’ टिजर
आफु भन्दा २७ वर्ष ठुला सलमानसँग फिल्म गर्दा ट्रोल बनिन् आलिया, ट्रोलर्सलाई दिइन यस्तो जवाफ